Maitiro ekutumira mari kuburikidza neBizum | IPhone nhau
Apple Pay ndiyo yakapararira yekubhadhara chikuva pakati pevashandisi veIOS, zvisinei, nepo Apple Pay Cash ichisvika kuSpain, isu tinofanirwa kutora mukana wevamwe vanokurumidza mari yekuchinjisa mapuratifomu akadai seBizum. Uye iyi ndeimwe yemikana yakawanda yakapihwa kwatiri kuburikidza Bizum, iyo sisitimu yekutumira uye yekugamuchira mari ipapo ipapo uye mahara emabhangi eSpain anopa vatengi vavo. Zviri nyore kwazvo kushandisa, asi kana iwe uine kusahadzika, muActualidad iPhone tinokuunzira bhuku rekushandisa kuitira kuti ugone kuwana zvakawanda kubva muBizum uye nokudaro tumira mari kushamwari dzako uye mhuri.
1 Chii chinonzi Bizum?
2 Maitiro ekutumira mari neBizum
3 Maitiro ekukumbira mari kuburikidza neBizum
4 Zvakachengeteka here kushandisa Bizum?
Chii chinonzi Bizum?
Bizum chimwe chikuva chekubhadharisa nekukurumidza uye kuwedzeredza, zvine mukana wekuti chakabatanidzwa mumashandisirwo enharembozha emazhinji emabhengi kana zvikwereti zviripo kuSpain, nhamba hombe yemabhangi anotibvumidza kubhadhara kuburikidza neBizum. Iyi ndiyo nzira iyo mabhangi anomira kune akasiyana mapuratifomu ayo anopiwa mumusika senge Samsung Pay, Nekudaro, ivo vane yakasarudzika yekuita izvi "kuchinjisa" nekukasira, uye chokwadi ndechekuti Bizum iri senge kuita kuchinjisa, asi ipapo, nekuti kunyangwe kana ukaitumira kunhamba yefoni, mari yacho inozopihwa iyo kubhengi account yemushandisi iyo yakanyoreswa kuburikidza nenhamba yefoni iyoyo
Kana bhangi rako riri mumufananidzo, iwe uri muhombe, iwe uchafanira kungo dhawunirodha iyo application uye kunyoresa muBizum mukati meye-pasi menyu. Kuti uite izvi, tevera anotevera matanho:
Vhura yako bhangi nhare mbozha
Tsvaga iyo Bizum yekudonhedza menyu
Kana usati wanyoresa, chofa paBizum uye bvuma mamiriro acho
Isu tinokupa iwe nhamba yefoni uye titumire isu meseji yekusimbisa iyo login
Izvo zvakakosha kuti isu tisimbise chokwadi chekuti isu tinogona chete kuve neakaundi account yakapihwa kune Bizum nhamba, Kana isu tichida kupa imwe account kubhengi kubva kune rimwe bhanga, isu tinongofanirwa kutevedzera nhanho dzakafanana dzataurwa pamusoro uye tinogashira SMS inosimbisa kuti takanzura iyo Bizum kubva kubhangi rapfuura uye yakapihwa account nyowani yebhangi. .
Maitiro ekutumira mari neBizum
Iyi sisitimu yakanangana nekutitendera kuti titumire mari nekukasira, muchokwadi iri pakarepo. Hapasisina zvikonzero neshamwari dze "zviise pandiri kuti handisi kupfeka zvakasununguka izvozvi", uye ndezvekuti achakwanisa kukupa mari kuburikidza neBizum nekukurumidza uye pakarepo, uyu mukana uyo mamwe masisitimu asina . Aya ndiwo maitiro ari nyore ekuchinjisa mari anogona kuitwa kuburikidza neBizum chero chikonzero chazvo.
Aya ndiwo matanho atinofanira kutora Kana isu tichida kuchinjisa kuburikidza neBizum, hauzove nechero chinetso kunze kwekutsvaga chikamu chakaringana chekushandisa kweIOS yebhangi rako raunovimba.
Vhura nharembozha yebhangi
Tsvaga mumenyu inodonha Bizum
Dzvanya bhatani "tumira mari" uye sarudza huwandu hwekutumira
Sarudza imwe yenzira nhatu dzekupa munhu anenge achigamuchira: Kumunhu waunovimba naye; Kune wandinofonera pabhuku rangu renhare; Kune nhamba yefoni.
Mirira kuti mutengesi upedze uye ugamuchire chisimbiso
Kana tangoita kuchinjisa kufamba uku haana mukana wekudzima, Kana isu tichitenda kuti takakanganisa, tinogona kukumbira kudzoka kwayo kuburikidza nematanho atinozosiya pazasi pemitsara iyi, kana imwe nzira ndeyekubata bhangi redu kuyedza kutsvaga mhinduro inogoneka. Unofanirawo kuyeuka izvozvo iyo yakanyanya kushanda muganho kuburikidza neBizum ndiko kutumira kwema500 euros, pamwe neyakaganhurirwa muganho uri 0,50 euros.
Maitiro ekukumbira mari kuburikidza neBizum
Imwe mukana weBizum ndeye iyo kumbira mari, Kubudikidza nemuchina uyu tinogona "kuyeuchidza" munhu ane chikwereti chedu mari yacho chaiyo, uye nekumupa mukana wekutevera chinongedzo chinosvika neSMS kuti aise kana kuendesa mari iyoyo yaakatikweretesa. Sezvatakambotaura, tinogona zvakare kuishandisa kana takanganisa pakutumira mari, kuti tikwanise kugadzirisa matambudziko nekukurumidza. Aya ndiwo matanho atinofanira kutora kana tichida kukumbira mari kuburikidza neBizum:
Dzvanya bhatani "kumbira mari" uye sarudza huwandu hwekutumira
Iwe uchagamuchira SMS ine kodhi iyo iwe yaunofanirwa kuisa mune yeBizum chikuva
Uye mukukosha iyi ndiyo nzira yatinofanirwa kukumbira mari kuburikidza neBizum, sekutumira mari iyo yakanyanya kushanda muganho kuburikidza neBizum ndiko kutumira kwema500 euros, pamwe neyakaganhurirwa muganho uri 0,50 euros.
Zvakachengeteka here kushandisa Bizum?
Bizum ipuratifomu yekukurumidza «kuchinjisa», Naizvozvo, isu hatifanire kutarisira kuchengetedzwa kwakawanda pachikuva ichi pane izvo zvinopihwa nebhangi kana mari, hazvikwanise kudzima ipapo ipapo, saka tinofanirwa kubata bhangi redu kuti tigadzirise chero dambudziko ramuka, uye Pamusoro pazvo, harina inishuwarenzi yechikwereti chehurumende yakapihwa sezvazvinoitika nemakadhi echikwereti.
Kune zvese izvi zvakakosha kuti tishandise Bizum nemutoro wakakodzera uye isu tinodzivisa kuendesa kune vatisingazive, kutora matanho ekuchengetedza kana tiri kutenga-kutengesa kuburikidza nepuratifomu iyi, semuenzaniso. Iva zvazvingaite, tinovimba kuti dzidziso iyi yakubatsira kushandisa Bizum nyore uye nekukurumidza uye nemikana yese yainopa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekutumira mari kuburikidza neBizum
Wakafarira Limbo here? Microbian ndiyo imwe nzira inokwezva
Pfungwa: Ko iyo iPad ine yekumonera skrini ingaite sei?